निर्माण अवधि लम्बिँदा माथिल्लो तामाकोशीको लागत ७३ अर्ब पुग्ने – Clickmandu
रमेश लम्साल २०७६ जेठ २९ गते १५:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । ‘गोरखा भूकम्प’ भारतको नाकाबन्दी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण लागत बढ्दै गएपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ ।
आयोजना शुरु गर्दा ३५ अर्ब लागत रहेको सो आयोजनाको कूल लागत वृद्धि भई ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने भएको छ । त्यसमा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने भएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ब्याजमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कूल लागतमा समेत प्रभाव परेको हो ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आगामी ११ असारमा हुने ११ औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५को प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनको लागत ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन शुरु गरी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका आधारमा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत अनुमान कूल ५१ अर्ब ९४ करोड पुग्ने छ भने सो अवधिको ब्याज मात्रै २१ अर्ब ७४ करोड लाग्नेछ । सोही आधारमा पूँजीकरणसहित आयोजनाको कूल लागत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो । प्रक्षेपित लागत हालको परिस्थितिसँग मिल्ने गरी यथार्थपरक रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा आयोजनाको लागत अझै बढ्ने देखिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ महीनैपिच्छे आयोजनाको निर्माणस्थलमा नियमति अनुगमनका लागि गइरहेका छन । घिसिङले निर्माणमा देखिएका समस्याबारे आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार, परामर्शदातासँग छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिँदै आएका छन ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६मा निर्माण अवधि छ वर्ष हुने अनुमान गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड तय गरिएको थियो । कम्पनीले निर्माण ढिलाइ भएपछि गत चैतमा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य बृद्धिका कारण आयोजनलाई १२ अर्ब थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको हो ।
यस्तै ऋण सम्झौता हुँदा ब्याजदर ११ प्रतिशत रहने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार आव २०६८÷६९ देखि २०७४÷७५ सम्मको ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ब्याजलाई प्रत्येक तीन महीनामा पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणमार्फत प्रदान गरेको ऋणमा प्राधिकरणको जोखिम प्रिमियमसहित स्थिर रुपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ ।
गत असारसम्म १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख ब्याज पूँजीकरण गरिएको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार आगामी चैतभित्र निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकाले सोही अवधिसम्मको ब्याज पूँजीकरण २१ अर्ब ७४ करोड हुने अनुमान छ । ऋण प्रदायक संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको २०७५÷७६को लागि ब्याजदर घटाई ११ प्रतिशत काम गरेका छन । नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर घटाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनामा सरकारले रु ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले छ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु दुई÷दुई अर्ब गरी कूल ३१ अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेका छन ।
कूल १० अर्ब ५९ करोड रकम स्वपूँजीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानीकोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई÷दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ ।
भगवान् मलाई ‘यस म्यान’ बाट बचाउ, ‘नो म्यान’ बाट त म आफैं बच्न सक्छुः बैंकर बुद्धि मल्लको बिचार
ब्यापारमा डुबेका व्यक्तिको सेयर बजारमा ५५ करोड लगानी ! सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान
ललिता निवासको ४ आना जग्गा धितोमा २६ करोड ऋण दिने बैंक कुन हो ?
उद्योगमा बिजुली पुर्याउने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण धमाधम
सरकारसँग नै छैन, आफैले अधिग्रहण गरेको जग्गाको रेकर्ड
बुढीगण्डकी पीडित भन्छन्- बैंकले घर खेत लान खोज्यो, कहिले शुरु हुन्छ आयोजना ?
प्राधिकरणको बजेट ४७ अर्ब, ८ अर्ब ३३ करोड १३ कमाउने लक्ष्य
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल भन्छन्- जलविद्युत क्षेत्रमा भ्रष्टाचार धेरै भयो, प्रमाण चाहिए दिन सक्छु